Tambajotra mpamatsy fitaovam-piadiana : sarona ny vovoka simika 200 kg fanamboaran’ny dahalo bala | NewsMada
Tambajotra mpamatsy fitaovam-piadiana : sarona ny vovoka simika 200 kg fanamboaran’ny dahalo bala
Par Taratra sur 12/09/2017
Saron’ny zandary tao Betroka ny tambajotra matanjaka, mpamatsy fitaovam-piadiana ny dahalo. Vovoka simika ”Chlorate de sodium” 200 kg mahery fanamboarana bala sy kojakoja momba izany ireto tratra niaraka tamin’ny olona valo, ka dahalo ny telo ireto.
Tsy araka ny fiheveran’ny maro fa tena olona manam-pahaizana momba ny fanamboarana fitaovam-piadiana mahery vaika ny dahalo any Betroka. Ireo dahalo ihany no manamboatra ny balana calibre 12 entin’izy ireo manao fanafihana. Misy koa anefa ireo tambajotra miray tsikombakomba amin’izy ireo amin’ny alalan’ny famarotana ireo fitaovana toy ny vovoka simika “Chlorate de sodium” fanamboarana izany.
Manoloana izany indrindra, olona miisa valo indray voasambotry ny zandary ao Betroka, ny asabotsy teo. Ny telo dahalo tratra teo am-pikotrehana fanafihana mitam-piadiana raha andian’olona mpiray tsikombakomba mamatsy ireo dahalo ireo ny akora simika fanamboarana bala hoenti-manafika kosa ny dimy hafa. Vovoka simika “Chlorate de sodium” milanja 210 kg no tratra tao an-tranon’izy ireo.
Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny zandary ao Betroka, nahazo loharanom-baovao izy ireo nandritra ny fisafoana sy fanangonam-baovao, ny asabotsy tolakandro teo fa misy dahalo mikononkonona manomana fanafihana any amin’ny lalana mivoaka ny tanànan’i Betroka mihazo an’Antranovato akaikin’ny seranam-piaramanidina. Nidina teny an-toerana avy hatrany ny zandary ka hita teo ireo dahalo ka nandositra avy hatrany ry zalahy, saingy tratran’ny zandary ny telo lahy raha tafaporitsaka kosa ny iray. Tratra tany amin’izy ireo ny mohara, lambamena fitondran’izy ireo manao fanafihana, bala ary vovoka simika famahanana ireo vodim-bala efa avy niasa mba ho azo ampiasaina indray, niampy karazam-by sy firaka maro ary “pile alkaline” fanao bala. Niroso tamin’ny famotorana ireo dahalo avy hatrany ny zandary ka nilaza izy ireo fa avy nividy ireo akora simika fanamboarana basy ireo tao amin’ny mpivady monina ao Betroka an-tampon-tanàna ihany. Nosamborin’ny zandary taorian’izay ireo mpivady voatonontonon’ireto dahalo ireto.
10 000 Ar ny eran’ny kapoaka kely…
Nitohy ny alahady maraina teo ny fanadihadian’ny zandary ka ny trano iray hafa an’ny mpiambina tanàna iray mifanakaiky amin’ny tranon’izy mivady ireto no nosavain’ny zandary. Re fa hoe nisy namindra tao amin’io trano io ny kitapo vitsivitsy misy ireo “Chlorate de sodium” tao amin’ireo mpivady voasambotra voalohany. Tratra tao ireo kitapo miisa telo misy ireo akora simika voalaza ireo, milanja 25 kg isanisany (mitotaly 75 kg) sy 125 kg (efa antsinjarany) vita fonosana kely madinidinika maro.
Voasambotra ilay mpiambina nahatrarana ireto entana ireto. Nanondro ireo olona niray tsikombakomba taminy namindra ny entana tao an-tranony indray izy raha vao nandre izy ireo fa nisy tratra ireo dahalo avy nividy akora simika tao amin’ireo mpivady tompon’entana, ka sao voasavan’ny zandary ny trano.
Nohamafisin’ny zandary tamin’ny alalan’ny fanadihadiana hatrany fa nisy lehilahy iray isan’ireo tompon’antoka miaraka amin’ireo mpivady tratra voalohany amin’ny famarotana ireto vovoka simika ireto, saingy lasa vao maraina niaraka tamin’ny olom-boafidy iray ao Betroka izy, ny alahady maraina teo. Efa nahatrarana basy tsy ara-dalàna tany amin’ity lehilahy ity volana vitsy lasa izay ka nahazoany fahafahana vonjimaika teny amin’ny fitsarana. Raha ny fampitam-baovao voaray, ireto olona ireto no mpamatsy ireo akora simika “Chlorate de sodium” fanamboarana basy amin’iny faritra iny ka amidin’izy ireo 10 000 Ar ny iray kapoaka kely “madco” ka ahavitan’ireo dahalo balana basim-borona miisa 70 izany.
Aiza ny fanjakana manoloana izao tambajotra goavana mahavita fitaovam-piadiana toy izao. Lany andro mievotrevotra etsy sy eroa amin’ny hoe efa mandray ny andraikiny ny fitondram-panjakana manoloana ny tsy fandrimpahalemana. Andraikitra inona izany? Fihetsiketsehana fotsiny no betsaka. Ny mpitandro filaminana anefa tsimponin’ny dahalo tsikelikely hatrany. Tsy hita anefa izay ataon’ny mpitondra fa mifanilika andraikitra. Soa fa ravan’ny zandary ireto tambajotra mpamatsy akora ny dahalo ireto fa raha tsy izany mitombo hatrany ny asan-dahalo.